Manjaro 2021-10-08 inosvitsa shanduko diki | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 2021-10-08, yazvino vhezheni yakagadzika ine shanduko shoma dzinotora mukana wekuratidzira chipfuwo chako zvakare
Asingasviki maawa makumi maviri nemana apfuura isu tinokuzivisa iwe kune chipfuwo chitsva chaManjaro. Vakazvizivisa mazuva apfuura, asi, sezvo ivo vasina kupa huwandu hwakawanda mukuisirwa nyowani, tinosarudza kukanganisa kudivi renyevero nekumhan'ara kunonoka pane kupa nhau dzisiri idzo. Nguva pfupi yapfuura, timu yekuvandudza Yakazivisa kuvhurwa kwe manjaro 2021-10-08, vhezheni itsva yakagadzikana inoziva zvishoma nekuti havana kuunza huwandu hwenhau kana hwakakosha chaizvo.
Pamwe, iko kusarudzika kudiki uko server kwave kuri kuona iyo runyora rwemashoko de Manjaro 2021-10-08 ine chekuita nekuti ini ndiri mushandisi we KDE, kuti nezuro vakaburitsa KDE Gear 21.08.2 uye panguva ino hapana vhezheni itsva yePlasma, kana masystems kana maapps, chimwe chinhu chandisina kushandiswa ku. Asi pane nhau, senge dzakawanda dzenzanga dzakagadziridzwa.
Manjaro anoratidza 2021-10-08
Izvo hazvinei nechekuvandudza, asi muforamu tambo ivo vakatora iwo mukana kutitaurira kuti vane chipfuwo chitsva uye zvishongedzo naye seye protagonist.
Vakagadzirisa tsanga. Panguva ino ivo vanorangarira kuti iwo 5.13 akateedzana anoiswa seEOL, saka haichazogashira rutsigiro. Ivo zvakare vanotora iwo mukana kutaura kuti iwo 5.12 akateedzana abviswa. Sekurudziro yemunhu, ini ndingati zvakanaka kushandisa Linux 5.14 kana Linux 5.10 LTS.
Mesa ikozvino yave pa21.2.3.
PipeWire yakavandudzwa kusvika ku0.3.38.
Vakagadzirisa mabhurawuza akadai saVivaldi, Akashinga uye Firefox (vachida kuziva kuti vanotaura Vivaldi wekutanga ...).
Thunderbird ikozvino yave pa91.1.2.
Zvimwe zvinowanzoitika zvichangoburwa zve software, kusanganisira Python.
Mavhezheni akanyorwa kuti "kugadzikana" uye zuva nderekugadziriswa kune aripo maficha. Izvi zvinoreva kuti mapakeji matsva akatomirira muPamac kana muPacman, uye inogona kuiswa kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa. Zvekuiswa zero, yazvino vhezheni ndeye Manjaro 21.1.4, asi pawebhusaiti yepamutemo vachiri kupa v21.1.3, pamwe nekuda kwematambudziko neanomisikidza. Kana ndiri echokwadi, iyo Manjaro 21.1.5 ISO inosvika padhuze neiyo inotevera yakagadzika vhezheni yeanoshanda system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Manjaro 2021-10-08, yazvino vhezheni yakagadzika ine shanduko shoma dzinotora mukana wekuratidzira chipfuwo chako zvakare
Google yakapa $ 1 miriyoni yekuvandudza yakavhurika sosi chengetedzo uye ichatsigirawo kuongororwa kwekuchengetedza pazvirongwa zvikuru zvisere
Mozilla kubva pakuipa kusvika pakuipa: kutanga neFirefox 92, bhurawuza rinoratidza kushambadzira kwakavharwa mumazano